Jery taratra… herinandro: mbola fandaminana aloha… | NewsMada
Par Taratra sur 22/02/2020
Nitsidika an’i Madagasikara ny minisitra ny Raharam-bahiny frantsay, nanome vola 240 tapitrisa euros hanatanterahana ny fandaharanasan’ny fanjakana malagasy amin’ny fampandrosoana (PEM). Nambarany fa hodinihina lalina ny fanapahan-kevitry ny filoha roa tonta ny amin’ireo Nosy malagasy manodidina.
Nanao hetsika fitondrana sora-baventy teo anoloan’ny masoivoho frantsay, Ambatomena, ireo fikambanana sy ny antoko politika mitaky ny hamerenana amin’i Madagasikara ireo Nosy malagasy manodidina mbola eo an-tanan’ny fanjakana frantsay, mikasa hametraka valanjaboahary amin’ny Nosy Sambatra.
Nisy ny savorovoro saika niafara tamin’ny fitsaram-bahoaka tany Ambilobe, faritra Diana, noho ny fahafatesan’ny vehivavy iray nitondra vohoka. Nidina ifotony ny tomponandraikitry ny fandriampahalemana sy ny filaminana. Taorian’ny famotorana, nalefa any Tsiafahy ny nahavanon-doza izay efa mpamerin-keloka.
Nivory voalohany ny komity misahana ny fanavaozana ny lalàna mifehy ny harena an-kibon’ny tany: ny avy amin’ny orinasa vaventy mpitrandraka, ny firaisamonina sivily, ny sendikà, ny fanjakana. Tsy mifanaraka intsony amin’ny lafiny tontolo iainana sy ny sosialy ary toekarena, ohatra, ny lalàna tamin’ny 2005.
Nilaza ny kaomisera jeneralin’ny lalàna eo anivon’ny filankevi-panjakana fa miisa 329 ny fangatahana fandravana didim-pitsarana momba ny voka-pifidianana ben’ny Tanàna sy ny fifidianana mpanolotsaina, natao ny 27 novambra 2019. Amin’ny 9 avrily ny fe-potoana farany fitsarana ny raharaha amin’izany.
Nanome fe-potoana hatramin’ny 31 marsa hameno ireo fepetra amin’ny fijoroany ireo haino aman-jery tsy ara-dalàna miisa 73 (16%) manerana an’i Madagasikara ny minisiteran’ny Fifandraisana sy ny kolontsaina. 92% ny ara-dalàna, saingy tsy feno ary ny 5% amin’izany no nahafeno ny azy. Hisy ny fepetra aorian’izay.
Amin’izany rehetra izany, mbola mibahan-toerana aloha ny fandaminana sy ny fametrahana filaminana. Izay ny ahazoana miroso amin’ny tena fampandrosoana? Na efa fampandrosoana…